Booliska Masar oo la xakameynayo - BBC Somali
Booliska Masar oo la xakameynayo
Image caption Booliska Masar ayaa lagu eedeeyay inay dadka ku tacaddiyaan.
Madaxweynaha Masar Cabdel fatah al-Sisi ayaa u sheegay wasiirkiisa arrimaha gudaha in qofkii boolis ah ee dambi gaysta aan looga hari doonin, ayadoo wax ka beddel xagga shuruucda ahna la geyn doono baarlamaanka 15 maalmood gudahood si tallaabadaas loo hir galiyo.
Madaxweyne al-Sisi ayaa tallaabadan degdega ah qaaday si uu u qaboojiyo carada dadweynaha ee ka dhalatay arxan darrada booliska.
Carada ayaa ka dhalatay ka dib markii uu nin boolis ah dilay taksiile ay ku murmeen lacagta gaari raaca.
Askarigaasi ayaa waxaa si xun u garaacay dadweyne goobta ku sugnaa, balse waxaa u suuragashay inuu baxsado.
Dadweynahaasi ayaa markaa ka dib hor dhoobtay xarunta booliska, ayaga oo cabashadooda muujiyay.
Hogaamiyaha Masar ayaa ka qabsi qaba isu soo bax ay dadweynaha sameeyaan, gaar ahaan kuwa ka dhashay gacan dhiiranaanta booliska.
Dibed baxyadii Masar ka dhacay sanadkii 2011-ka ayaa qeyb ahaan ka dhashay arxan darrada laamaha ammaanka, waxaana markii dambe ay dhaliyeen inuu xukunka ka dego madaxweynihii xilligaasi, Maxamed Xusni Mubarak.
Qaar badan oo ka mid ah shacabka Masar ayaa su’aal gelinaya in tallaabada madaxweynaha ay dhab ahaan wax ka qaban karto tacaddiyada ay geystaan booliska, ayada oo hay’adaha xuquuqul insaanka ay sheegayaan in laamaha ammaanka ee dalkaasi aysan cidna ka cabsan.
Waxaa adag in askarta booliska Masar dembi lagu helo, mararka qaarna waxaa dhacdo in maxkamadi ay laasho eedeymaha loo haysto booliska.
Dhowr maalmood ka hor, maxkamada ugu sareysa Masar ayaa laashay kiiska askari lagu helay in bishii January uu toogtay haweeney ka qeyb qaadaneysa mudaharaad, walow marka uu dilay muuqaal fidiyow ah laga duubay.